12.03 Saro-bidy ny taranaka
Anio Alatsinainy 12 Marsa 2018 dia ny Levitikosy 12.1-8, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika ao anatin' izany ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
1 Ary Jehovah niteny tamin’ i Mosesy ka nanao hoe :
2 Mitenena amin’ ny Zanak’ Isiraely hoe : Raha misy vehivavy manan-anaka ka tera-dahy, dia haloto hafitoana izy; tahaka ny andro fahalotoany raha mararin’ ny fadim-bolany no hahalotoany.
3 Ary amin’ ny andro fahavalo dia hoforana ny zaza.
4 Ary telo amby telo-polo andro no hitoeran-dravehivavy amin’ ny rany izay mahadio azy; tsy hanendry zava-masina izy, na hiditra ao amin’ ny fitoerana masina, mandra-pahatapitry ny andro fidiovany.
5 Fa raha tera-bavy kosa izy, dia haloto tapa-bolana, tahaka ny tamin’ ny fahalotoany ihany koa; ary enina amby enim-polo andro no hitoerany hidiovany amin’ ny rany izay mahadio azy.
6 Ary raha tapitra ny andro fidiovany ny amin’ ny zanany, na lahy na vavy, dia zanak’ ondry izay iray taona no halainy ho fanatitra odorana sy zana-boromailala, na domohina, ho fanatitra noho ny ota, ka ho entiny eo anoloan’ ny varavaran’ ny trano-lay fihaonana ho eo amin’ ny mpisorona ireo.
7 Ary izy hanatitra izany eo anatrehan’ i Jehovah ka hanao fanavotana ho an-dravehivavy, dia hadio tamin’ ny fandehanan’ ny rany izy. Izany no lalàna ny amin’ ny vehivavy tera-dahy na tera-bavy.
8 Ary raha tsy tratry ny ananany ny zanak’ ondry, dia hitondra domohina roa na zana-boromailala roa izy, ny anankiray hatao fanatitra odorana, ary ny anankiray kosa hatao fanatitra noho ny ota; ary ny mpisorona hanao fanavotana ho an-dravehivavy, dia hadio izy.
SARO-BIDY NY TARANAKA
Noforonin’Andriamanitra ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray ho mpivady mba hisian’ny taranaka madio hanohy ny asa nataony (Genesisy 1.26, 9.1).
Noho ny ota niditra tamin’ny olona tao amin’ny saha Edena anefa dia nanjary miraikitra amin’ny olona hatramin’ny vao teraka ny fahalotoan’ny ota (2, 5, Salamo 51.5).
Tsy tian’Andriamanitra hitoetra amin’izany anefa ny zazakely izay fisianaina vaovao miditra amin’izao tontolo izao ka jereny manokana ny momba azy.
Nomeny sahady ny toromarika hahatanterahana ny fanadiovana azy (3, 6-8).
Tsy foiny ho very na dia ny iray aminy aza, iriny hahazo ny famonjena sy ny fahamasinana ary antsoiny ho amin’ny fiainana mandrakizay izay efa nomanin’i Jeso Kristy (Matio 18.14).
Na dia teraka tamin’ny ota aza ny zanany, ary maloto noho ny fiterahana izy dia nomen’
andriamanitra azy ny fomba hidiovany (6-8).
Ankehitriny dia " Ny ràn’i Jesoa no manadio ho afaka amin’ny ota rehetra " (1 Jaona 1.7) izay azo atao amin’ny fotoana rehetra.
Nomen’Andriamanitra toerana sarobidy ny reny efa voavonjy mba hahatanteraka ny planin’Andriamanitra ho an’ny zanany (2Timoty 1.5, Lioka 18.15-17).
Manandratra vavaka ho azy ireo eo anatrehan’Andriamanitra, mitaiza azy amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy ary hilaza amim-pifaliana eo anatrehan’Andriamanitra hoe " Indreto izaho sy ireo zanaka nomenao ahy ", satria nateraka indray koa ny zanany (Jaona 3.3).
Tompo ô !
Ireo taranako sy ny taranakin'ny Malagasy rehetra anie
mba ho isan’izay handova ny fiainana mandrakizay ao Aminao.
Hamaranantsika ity Mana androany ity dia hivavaka ho an'ny Fampianarana sy ny Fanabeazana eto amin'ny Fikambanana Mpiara Mamaky ny Baiboly isika.